Public News Agency7months ago
स्रष्टाको ऐना, नेताको अनुहार
बिपी कोइराला पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले जुद्धशमशेर राणाकै पालामा विराटनगरको आफ्नै घर कम्पाउण्डमा आदर्श विद्यालय खोलेका थिए । दरबार स्कुलपछि निजी स्तरबाट खोलिएको यो पहिलो विद्यालय थियो । राणाको निरंकुश शासनकालमा खुलेको ... थप हेर्नुहोस्
स्वास्थ्य : सुकेनासबाट कसरी बच्ने ?
हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासको लागि पौष्टिक तत्त्व वा पोषण तत्त्वहरू चाहिन्छ । कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटिन, चिल्लो, खनिज पदार्थ र भिटामिनलाई पौष्टिक तत्त्व भनिन्छ । ती पोषण तत्त्वहरू हामी दैनिक खानाबाट प्राप्त गर्दछौँ ... थप हेर्नुहोस्
बिपीलाई न्याय दिने न्यायमूर्ति
संकेत कोइराला न्यायाधीश जनकमान : तपाईंलाई सशस्त्र जनक्रान्ति गरेको आरोप सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ? विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला : मैले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेको छैन । तर, सो को सिद्धान्ततः व्याख्या गरेकोबाट प्रेरणा पाई पार्टीका ... थप हेर्नुहोस्
संकटमा घरेलु प्रविधि
एउटा युग, जुनवेला हाम्रा पिता पुर्खा–ढुंगामा ढुंगा घोटेर आगो बाल्थे । बाँस अथवा वनस्पतिको पातलाई कपडाको रुपमा प्रयोग गर्थे । अनि ओडारमा बस्थे । त्यही युगमा त्यो पुस्ताले जीविकोपार्जनका लागि धेरै ... थप हेर्नुहोस्
विश्व सम्पदाको पर्खाइमा जानकी मन्दिर
मैथिली सभ्यताको केन्द्र जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर वर्षौंदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन प्रतीक्षारत छ । जनकपुरधाम पनि भनेर चिनिने माता जानकीको जन्मस्थल तथा राजऋषि जनकको राजधानी एवं दरबार हालसम्म विश्व सम्पदा ... थप हेर्नुहोस्
ढिकी, जाँतो पढाउने सरकारी स्कुल
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कालिका गाउँ । सीमान्तकृत माझीहरूको बसोबास रहेको यो गाउँ चरम गरिबीको खुल्ला पुस्तकको परिचय बोकेर वर्षौंदेखि बसिरहेको छ । तर, तिनै गरिबका सन्तान पढ्ने उखुबारीमा रहेको यो विद्यालयको इज्जतै ... थप हेर्नुहोस्
६ दशकदेखि राष्ट्रिय पोशाक सिलाउने कालिगढ
ध्रुव रिजाल लुगा सिलाउने कलको पांग्रासँगै उनको जीवन घुमेको पनि ६ दशक नाघेछ । पुर्ख्यौली थातथलो काठमाडौं । अधिकांश सन्तानको जीवन आरम्भ साउँ अक्षर घोकाइबाट शुरु हुन्छ । तर, यी पात्रले स्कुलको ... थप हेर्नुहोस्
काठमाडौं वसन्तपुरकी सुमीका बज्राचार्य टेलिभिजनमा समाचार पढ्थिन् । यसबाहेक उनले व्यापारिक वस्तुहरूको विज्ञापनमा मोडलिङ पनि गरिन् । यतिले पनि उनको चित्त बुझेन् । मिस नेपालको प्रतिस्पर्धामा उत्रिइन् । रंगिन दुनियाँमा रमाइरहेकी ... थप हेर्नुहोस्
बालीमा फोहोरको सम्मान
संकेत कोइराला इण्डोनेशियाको बालीमा विश्वका पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दो छ । मुस्लिम मुलुक भए पनि बालीमा हिन्दु धर्मको प्रभाव, सरदर सस्तो पर्यटकीय बजार र प्राकृतिक सम्पदाको उचित संरक्षणका कारण नेपाली पर्यटकले बालीको भ्रमणमा ... थप हेर्नुहोस्
Showing 169 to 180 of 178